Naafee Nacaybkaaga? Malaha Waa Jacaylka Ku Jeclaada! | Martech Zone
Wednesday, April 15, 2015 Isniin, April 20, 2015 Douglas Karr
Jay Baer oo ah nuxurka xiritaanka ayaa ahaa midkii ugu fiicnaa ee aan ku arko Dunida Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada. Jay wuxuu ka hadlay buugiisa soo socda, Naafee Nacaybkaaga. Soo bandhigidiisu waxay ahayd mid cajiib ah oo lagu majaajilooday cilmi baaris la yaab leh Tom Webster iyo kooxdiisaba sida maalgashiga xalinta cabashooyinka si deg deg ah iyo istiraatiijiyad leh u kobcin lahaayeen ganacsigaaga.
Soo bandhigiddu waxay la hadlaysaa tusaalooyin qaali ah oo shirkadaha ka jawaabaya cabashooyinka iyo sida ay ugu wanaagsan tahay ganacsiga.
Waxaan ahay shaki. Xaqiiqdii, sanadkii ka horreeyay ee Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada waxaan ku sameeyay bandhig halkaas oo aan ku qaatay ceebihii ugu sarreeyay ee shirkadaha ku baahay baraha bulshada waxaana caddeeyay in midkoodna khaladaadkaas uusan lahayn saameyn muddo-dheer ah, saameyn taban ku yeelatay shirkadaha iyaga sameeyay.
Barta Facebook dhowaan, Jay wuxuu la wadaagay indha indheyn shaqsiyadeed oo ku saabsan adeegga duulimaadka waxaana si dhakhso leh u xasuusiyay wadahadalkan cajiibka ah ee u dhexeeya majaajiliiste Louis CK iyo Conan O'Brien.
In kasta oo aan la yaabay tikniyoolajiyadda cajiibka ah ee laga heli karo farta macaamiisha maalmahan, haddana sidoo kale maalin walba waan ka niyad jabsanayaa durbaanka joogtada ah ee shirkadda ee aan ku arko internetka.
Miyey Tahay In Apple Ay Qabato Nacaybkeeda?
Tusaale weyn oo aan kula hadli karo gacanta koowaad waa Apple. Waxaan ahay taageere weyn oo Apple ah. Waxaan ka mid ahaa kiisaska lowska ee dhigay qaylo-dhaantiisa 3AM EST oo waxaan iibsaday qaybtii ugu horreysay ee Apple Watches. Ma sugi karo inaan gacmahayga ku helo.
Akhriso khadka tooska ah waxaana jira dhawaq aad uxun oo teknolojiyad ah, boggaga wax qora, iyo kuwa neceb Apple oo ku neceb saacadda. Meel walba way joogaan… fikradahooda midkoodna aniga igama khuseeyo. Mana u maleynayo in fikradahooda midkoodna uusan quseyn Apple. Aad qaali u ah, hal abuurnimo la'aan, arrimaha tayada iyo xawaaraha… dhammaan cabashooyinka nacaybka. Haye waxay neceb yihiin million milyan oo maalinti la iibiyo hadana dib loogu dalbado wixii ka dambeeya Juun. Naceybluhu uma socon Apple Watch si kasta, maxaad ugu duubi lahayd?
DK New Media Wuxuu necebyahay Nacabka necebna wuu jecelyahay kuwa jecel
Sanadkii la soo dhaafay, ka dib markii aan ka soo kabanay sanad ka hor rabshad, waxaan bilownay soo kabashadeenna. Qaar badan oo ka mid ah arrimaheena ayaa aniga qaladkeyga lahaa. Waan ballaarinay anagoo aan haysan agabkii loo baahnaa ka dibna isku dayay inaan buuxino farqiga. Halkii aan si adag uga shaqeyn lahayn si loo aqoonsado macaamiisha saxda ah, waxaan qaadanay ku dhowaad qof walba oo weydiisanaya gargaarkeena… waxayna ahayd riyo qarow. Waxaan dhaawacnay xitaa nashqadeynta infographic ku saabsan noocyada macaamiisha aan gubaynay.
Waxaan aqbalnay inaan la shaqeyno macaamiil badan oo xad gudub iyo raqiis ah. Nama ay eegin lammaane ahaan, waxay noo eegeen sidii caqabad ah in la tuujiyo dinaar kasta oo ugu dambeeya. Maanan qabsan nacabyadeenna, waan erynay.
Waxaan hadda ku dadaalnaa dadaal aan caadi ahayn sidii aan u kala mudnayn lahayn macaamiisheenna oo aan u hubin lahayn in aan dhaqan ahaan isku habboon nahay oo aan aaminsanahay in aan ku guuleysan karno la shaqeynta iyaga. Farqiga u dhexeeya waa habeen iyo maalin. Waxaan ku jirnaa sanadkeenii ugu fiicnaa abid, waxaan balaarineynaa raadkeena, waan faraxsanahay, shaqada aan qabanayna waa mid aad ugafiican sidii hore.
Isku dayida inaad ka farxiso nacaybkeena waxay ahayd daal. Oo markaa iskama dayno mar dambe. Haddii qof naga xumaado, waxaan si fudud ugu jawaabnaa si daacad ah iyaga - ha ahaato mid guud ama mid gaar ah. Mararka qaarkood waxaan xirnaa geesaha, laakiin inta badan waxaan si fudud uga dhaqaaqnaa. Waxaan u baahanahay inaan diirada u saarno macaamiisheena nagu qadariya, ee aan ahayn kuwa aan waligood shaqaalayn doonin, nagu talin doona, iyo kuwa dib u fadhiisanaya iyagoo qaadanaya talaalada dheriga.
Nacab nacaybkaaga? Dadaal badan. Waxaan jeclaan lahaa inaan jeclaado kuwa i jecel. Iyagu waa kuwa faafiya ereyga, ballaadhiyana waxqabadyadooda nala shaqeeya, noo hela macaamiil badan, kuna qanca waxa aan u qabanno.
Ku guuleystayaashu miyey ku caajisaan nacayb?
Markaan u fiirsado ganacsiga, cayaaraha, siyaasadda, ama hoggaamiye kasta oo kale oo guuleysta - marwalba waxaan arkaa dad iska indhatiray nacaybkooda oo goostay naftooda. Guul darrooyinka aan arkay waxay ahaayeen dad dhageystay qof walba, iskuna dayay inuu qof walba ka farxiyo, weligoodna aan la kulmi karin rajooyinka aan macquul ahayn ee ay dajisay suuqa.
Markaan fiiriyo warshadaha sida mobilada, fiilooyinka, korontada, shirkadaha diyaaradaha iyo kuwa kale see Waxaan arkaa macaamiisha oo dalabyo si aad ah uga badan qiimaha sheyga ama adeegga ay diyaar u yihiin inay bixiyaan. Haddayna helin waxa ay rabaan, waxay ku tuuraan qadka tooska ah ee internetka si ay dadweynuhu u arkaan. Hadday shirkaddu isku daydo inay si fiican ugu adeegto oo ay biil dheeraad ah ugu darto biilkooda, macaamiisha ayaa damaanad qaadaya xalka kharashka xiga ee soo socda.
Malahayga waa hadii ______ diyaaraduhu ula dhaqmaan macaamiishooda si ka sii daran, inay wali diyaarado buuxin lahaayeen oo ay aadayaan halka ay ku sii jeedaan ee ay ka buuxaan macaamiisha isticmaalay raadinta internetka si ay u helaan qiimaha ugu hooseeya Uma maleynayo in kuwa neceb badankood xitaa aysan dan ka laheyn shirkadda diyaaradaha, waxay ka caban doonaan si kasta oo ay tahay Inta badan shirkadaha duulimaadyaduna waxay leeyihiin xarumo la dhigey halkaas oo ay macquul tahay in laga fogaan karo astaantooda xitaa haddii aad daryeesho.
Jacayl Ma Rabtaa? Bixi!
Dhinaca kale, haddii aan bixiyo fasalka ganacsiga, iibsado gawaarida raaxada, lacag ku bixiyo damaanad qaadka dheeriga ah ama caymiska, ama guga laptop ka qaalisan, weligey umuuqdo inaan qabo dhibaatooyinka ay dadka kale la kulmaan. Qolka fadhiga ee socotada Delta - tusaale ahaan - waa AMAZING waxaadna ka iibsan kartaa gelitaanka safarada badankood xoogaa dheeraad ah. In kasta oo qof kastaa sugayo wakiilka tigidhada, waxaan cabayaa cabitaan oo wakiilka Delta wuxuu hoos u dhigay magacayga wuxuuna ku dhaqaaqay ficil si uu iigu sii socdo. Wax buuq ah, maya muss both Labadaba waan ku qancay waana bixiyay.
Bixinta lacag dheeri ah, waxaan helaa adeeg aad u fiican, ku dhowaad waqtiyo sugitaan, iyo jawaabo deg deg ah. Haddii aan doonayo waxa ugu fiican, waa inaan diyaar u ahaado inaan iska bixiyo. Haddii aanan awoodin waxa ugu fiican, waa inaan ku qanacsanahay waxa haray.
Ha iga helin qalad. Waxaan la imaan doonaa dadaal dhab ah si aan isugu dayo inaan u rogo macaamiil aan faraxsaneyn. Waxaan ku leeyahay ugu yaraan intaas in ka badan maxaa yeelay waxay nala sameeyeen maalgashi. Laakiin haddii ay uun murugoonayaan ama ay si xun iila dhaqmaan aniga ama shaqaalaheenna, qofna waqti uma helin dat! Waxaan u maleynayaa inay jiraan tiro aad u tiro badan oo nacaybka khadka tooska ah ee shirkadaha ay tahay inay u sheegaan bugger off.
Jay… shaqadaadii baa lagaa jaray.
Tags: edison cilmi baarisneceb cadaawayaashaadaJay Baerjeclaada kuwa ku jecelcabashooyinka internetkaFaallooyinka internetkadareentom webster
Qabsashadu ma noqon kartaa Tallaabada xigta ee Socdaalka Iibsadahaaga?
Farriin weyn Doug, mahadsanid.
Waxyaabo dhowr ah. Kama hadlayo khaladaadka waaweyn iyo dhibaatooyinka baraha bulshada ka holcaya. Midkoodna tusaalaha ku jira buuggu ma jirin sidaas oo kale, tusaalooyinka buuggana midkoodna sidaas ma noqon doono, sidoo kale. Waxa aan ka hadlayo waa faallooyinka xun ee maalin-laha ah, cabashooyinka, 1 iyo 2-xiddig ee dib u eegista ah ee shirkadaha ku dhowaad dhammaan cabbirka iyo noocyaduba ay uga jawaabaan si aan waafaqsanayn, haddiiba ay yihiin.
Ma shaqo badan baa in laga jawaabo cabasho kasta, mar kasta, kanaal kasta? Dabcan. Laakiin cilmi-baarista aan sameynay waxay muujineysaa in kororka u-qareemida macaamiisha markii aad ka jawaabeyso cabashada ay tahay mid la tixgelin karo, iyo hoos u dhaca ku yimid u-doodista macaamiisha markii aad iska indhatirto diidmada ayaa xitaa ka sii weyn.
Shirkadaha qaar ma awoodaan inay iska indhatiraan faallooyinka iyo cabashooyinka xun? Haa. Laakiin shirkadahaas maahan kuwo guud.
Oo weliba waxaan rabaa inaan caddeeyo in qormada Hug Your Haters ay tahay MA in macaamilku had iyo jeer sax yahay. Run maahan, oo caqli gal maahan inaad ganacsigaaga sidaa ku maamusho. Warqadda daawadu waa taa beddelkeeda in macaamilka had iyo jeer LA MAQAL. Farqiga weyn. Xaqiiqdii, inkasta oo aanan ku soo gaarin buunbuuninta hadalka, talo soo jeedintaydu waa inaadan waligaa ka jawaabin wax ka badan laba jeer hal xaraf / cabasho / boostada, iwm. Yaraynta soo noqoshada waqtigaas, sida caadiga ah.
Sidoo kale waxaa xusid mudan farqiga u dhexeeya Nacayblayaasha Offstage-ka ah ee si gaar ah uga cabanaya, iyo kuwa nacaybka loo yaqaan 'Onstage Haters' ee dadka ka cawda. Furaha ayaa ah fahamka in kan hore uu doonayo jawaab, kan dambena uu doonayo dhageyste. Dareen-darradu waa cayaar daawade hadda, iyo in kastoo aad (si sax ah) u rabto inaad u sheegto macaamil dhibsan (ama xanaaqsan) macaamiisha F-OFF xaqiiqda ayaa ah in gaar ahaan kuwa loo yaqaan 'Onstage Haters', khatarta dhabta ah aysan aheyn luminta macaamilkaas, laakiin halkii waxa ay daawadayaashu ka fikirayaan shirkaddaada iyo qiyamkaaga.
Jay - aad baad ugu mahadsantahay waqtiga aad siisay inaad cadeyso. Waxaan horeyba u dalbaday dhowr nuqul oo buugga ah shaqaalaheena madaama macluumaadkani muhiim u yahay macaamiisheena.
Waxaan marwalba kaga fakaraa aragtida fudud ee ah “macaamilku had iyo jeer sax maahan,… laakiin iyagu waa macaamiisha”. Marka, taasi waxay igu kaliftaa inaan gaabis noqdo oo aan uga jawaabo si ku habboon - anigoo raadinaya inaan fahmo waxa dhabta ah ee dhibaatadu tahay iyo waxa u noqon kara jawaab macquul ah iyo xalka. Taasi waxay hagtay dadaaladaydii ahayd "inaan necbaado nacaybka."
Anigu si daacad ah uma ahi taageere, Curt. Waxaan u maleynayaa mararka qaar dadku waa iska yar yihiin dhaqankooda xunna waa inaan la aqbalin. Si ka fudud ayaa loo dhahay intii la qabtay markii aad leedahay meheradda waxaan filayaa!